Ukulungiselela ukuhlolwa kwe-IELTS - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ukulungiselela Uhlolo lwe-IELTS
Lungiselela ikusasa lakho
IELTS Ukulungiselela Ukuhlolwa
I-IELTS ukuhlolwa okumi ngomumo kwamazwe omhlaba kwamakhono olimi lwesiNgisi. Kukala ubungcweti bolimi babantu abafuna ukufunda noma ukusebenza lapho isiNgisi sisetshenziswa njengolimi lokuxhumana. Isetshenziselwa izinjongo zokufundisa, zokufika kanye nomsebenzi. Inkambo yokulungiselela ye-IELTS yenzelwe ukusiza abafundi ukuthi bathuthukise ulwazi lwabo lolimi futhi bafinyelele amamaki angcono kakhulu wokuhlolwa kwe-IELTS.
Inkambo yethu yokulungiselela i-IELTS izokunikeza isingeniso sesakhiwo sokuhlolwa kwe-IELTS kanye nokuvuselelwa kwamasu wezinto ngazinye. Uzofunda ukuthi yini ongayilindela ngesikhathi sokuhlolwa kwe-IELTS futhi uthuthukise isikolo sakho ngokuzijwayeza nokubukeza. Sebenzisa izinsiza zokuvivinya ezisemthethweni bese uthola impendulo evela kumfundisi.
Amakilasi ethu mancane, okuvumela ukuthi uthole isipiliyoni sokufunda esenzelwe wena. Le khosi izokusiza ukuthi uqaphele imithombo yamaphutha ejwayelekile futhi ikunikeze amakhono owadingayo wokugwema ukuwaphinda ngoSuku lokuhlola.
Ubude: ubuncane amaviki ama-4
Isifundo senzelwe ukujwayeza abafundi ifomethi yokuhlolwa kwe-IELTS ngokubukeza okuqukethwe okufana nalokho abazokubona kuhlolo lwe-IELTS. Isifundo sizogxila ekusizeni abafundi ukuthi bathuthukise ikhono ngalinye (ukufunda, ukubhala, ukulalela nokukhuluma). Abafundi bazokwenza ngokuthatha izivivinyo zokulingisa nokufunda amasu ahlukile namasu okubasiza balungiselele ukuhlolwa futhi bafinyelele amamaki amahle kakhulu.
Abafundi abathatha isifundo kumele babe sezingeni eliphakeme elilingana nezinga le-BLI le-10. Uma umfundi engahlangabezani nezinga elidingekayo ukuze angeniswe esifundweni sokulungiselela se-IELTS, kufanele bathathe amakilasi ethu ajwayelekile aze afinyelele ezingeni eliphakeme.
Imali yohlelo ifaka
I-BLI Montreal yindawo esemthethweni yokuhlola ye-IELTS. Sicela wazi ukuthi lezo zinsuku zingashintsha. Uma ufisa ukuthatha isivivinyo se-IELTS, kufanele ulandele izinyathelo ngokubhaliswa kwe-inthanethi noma ukhulume nommeleli we-BLI ukuthola eminye imininingwane.
Izinsuku zokuhlola zika-2020
Ngenxa yesimo seCovid-19, azikho izinsuku zokuhlola ezizayo.
Sizomemezela lapho sizoba neminye imininingwane.
Njalo ngezinsuku zokuqala zeseshini esemthethweni
Ubuncane beviki 4
Ubuningi bamaviki ayi-12